I-World March Yokuthula Nokungabi Nenkululeko - I-World March
I 2nd World MARCH isiphelile
Isivumelwano sokwenqatshelwa kwezikhali zenuzi sesivele siqalile ukusebenzaulwazi
I-1ST LATIN AMERICAN MULTI-ETHNIC NENKQUBO YOKUPHILA YOKUMISELWA KWE-NOVIOLENCE Yaziswaulwazi
I-2 World Marichi for Peace and NoViolence
KUSUKA 2 OCTOBER 2019 TO MARCH 8 2020
Bika isimo sezwe esiyingozi ngezingxabano ezikhulayo, qhubeka ukhulisa ukuqwashisa, wenze izenzo ezinhle zibonakale, unikeze izwi ezizukulwaneni ezintsha ezifuna ukufaka isiko le-Nonviolence.
Ngemuva ye-1º World March 2009-2010, ukuthi phakathi nezinsuku ezingu-93 zahamba amazwe we-97 namazwekazi ayisihlanu. Le 2ª World March for Peace and Nonviolence phakathi ne-2019 ne-2020 iminyaka ihlongozwa.
Isiphi futhi kuphi
I-2ªMM izoqala eMadrid nge-2 ka-Okthoba ka-2019, Usuku Lwamanye amazwe Lokungabikho Kobugebengu. Lizoshiya e-Afrika, eMelika, e-Oceania, e-Asia, efika eMadrid ngo-8 ka-Mashi ka-2020, Usuku Lomhlaba Wonke Wabafazi.
Izindaba zakamuva ze-Mashi
I-2ª MM yaqala eMadrid 2 Okthoba ka-2019, Usuku Lomhlaba Wonke Lokungabi Nesibindi, eminyakeni eyishumi emva kwe-1ª MM.
Ingabe ufuna ukusebenzisana nathi?
Ukusekela ukuvakasha kuka-Mashi
Inkambo yemashi idinga abaxhasi ukuze bafinyelele izethameli eziningi kanye nokuzibandakanya.
Xhuma kumanethiwekhi omphakathi
Zizovela ngezenzo nemiklamo kusukela kwesisekelo senhlalo.
Izindawo eziningi ezinde futhi ezihlukahlukene zokubamba iqhaza kunamaqembu e-Promoter
Ukuxhumanisa izinhlelo, amakhalenda nemizila
Imininingwane ethile ngathi
Ngokuphikiswa kwe-1 World March Mashi 2009-2010, okwadlula izinsuku ezingama-93 emazweni angama-97 namazwekazi amahlanu. Ngokuhlangenwe nakho okuqoqiwe nokubala izinkomba ezanele zokuba nokubamba iqhaza okukhulu kakhulu, ukusekelwa kanye nokusebenzisana ... Kuhlelwe ukwenza lo Mashi Wezwe wesi-2 Wokuthula Nokungabi Nodlame 2019-2020.
Bika isimo sezwe esiyingozi ngempi eqhubekayo
Qhubeka ukudala ukuqwashisa ukuthi kungukuthi "ukuthula" nokuthi "ukungabi nampofu"
Ukwenza kubonakale izinyathelo ezihlukahlukene futhi ezihlukahlukene kakhulu ezenziwa abantu, abaqoqiwe kanye nezizwe ezindaweni eziningi ekuqondiseni amalungelo omuntu.
Ukunikeza izwi ezizukulwaneni ezintsha ezifuna ukuthatha futhi zishiye uphawu